အိန္ဒိယ ကျောင်းသားများက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ရက်သတ္တပတ်အတွက် တောရိုင်းတိရစ္ဆာများ၏ ရုပ်ပုံကို မျက်နှာပေါ်တွင် ပန်းချီရေးဆွဲ - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယ ကျောင်းသားများက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ရက်သတ္တပတ်အတွက် တောရိုင်းတိရစ္ဆာများ၏ ရုပ်ပုံကို မျက်နှာပေါ်တွင် ပန်းချီရေးဆွဲ
Asia Politics, Law & Military မြန်မာ-中文
နယူးဒေလီ၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာပရာဒတ်ရှ်ပြည်နယ် မြို့တော် ဘိုပေါရှိ Van Vihar အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကျောင်းသားများက ၎င်းတို့၏ မျက်နှာများတွင် တောရိုင်တိရစ္ဆာန်ပုံများဖြင့် ဆေးခြယ်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာပရာဒတ်ရှ်ပြည်နယ် မြို့တော် ဘိုပေါရှိ Van Vihar အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ မျက်နှာတွင် တိရစ္ဆာန်ပုံဆေးရောင်စုံခြယ်ပေးနေသော ပန်းချီဆရာတစ်ဦးအား အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာပရာဒတ်ရှ်ပြည်နယ် မြို့တော် ဘိုပေါရှိ Van Vihar အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မျက်နှာတွင် တိရစ္ဆာန်ပုံဆေးရောင်စုံခြယ်ထားသော ကျောင်းသားများကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာပရာဒတ်ရှ်ပြည်နယ် မြို့တော် ဘိုပေါရှိ Van Vihar အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မျက်နှာတွင် တိရစ္ဆာန်ပုံဆေးရောင်စုံခြယ်ထားသော ကျောင်းသားတစ်ဦးကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဒေသရင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျာ ရက်သတ္တပတ်ကို နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Asia Album: Indian students have faces painted with wild animals for Wildlife Week
NEW DELHI, Oct. 8 (Xinhua) — Indian students had their faces painted with wild animals during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state.
Every year, from 2nd to 8th October, India celebrates Wildlife Week with an aim to protect the country’s fauna.
1- A student with wild animal paint makeup poses foraphotograph during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state, Oct. 7, 2021. (Xinhua/Stringer)
2- An artist paints the face ofastudent with wild animal during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state, Oct. 7, 2021. (Xinhua/Stringer)
3- Students with wild animals paint makeup pose foraphotograph during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state, Oct. 7, 2021. (Xinhua/Stringer)
4-5- An artist paints the face ofastudent with wild animal during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state, Oct. 7, 2021. (Xinhua/Stringer)
6- A student with wild animal paint makeup poses foraphotograph during Wildlife Week at Van Vihar National park in Bhopal, the capital city of India’s Madhya Pradesh state, Oct. 7, 2021. (Xinhua/Stringer) ■
ကူဝိတ်ခရီးသည်တင်လေယာဉ် ဗုံးသတိပေးချက်ကြောင့် တူရကီနိုင်ငံ၌ အရေးပေါ်ဆင်းသက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘန်ဂလိုမြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ရေဖုံးလွှမ်းနေသည့်နေရာများရှိ ဒေသခံများအား ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)